Spotify: kugadziriswazve kweLinux desktop app pamaoko ako | Linux Vakapindwa muropa
La ChiSweden app Spotify Iyo ndeimwe yeakakurumbira kwazvo pasirese kune vanoda mimhanzi. Iyo yekumhanyisa mimhanzi fomati yaive yechimurenga panguva iyoyo, uye yakakwanisa kushandura iyi indasitiri uye kunyangwe kudzikisira piracy nekuda kwayo mahara maakaundi ayo iwe aunogona kuteerera kune ako aunofarira maartist mukutsinhana nekuve nekumwe kushambadzira.
Iyo inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira iyo Linux desktop zvakare. Uyezve, vagadziri vayo vachangobva kuzivisa pasuru yekuvandudza uye iyo kugadziriswazve kwayo graphical interface. Chinhu chaunogona kunakidzwa mune yako yaunofarira GNU / Linux distro kubva zvino zvichienda mberi ...
Spotify GUI Shanduko Inouya kuvandudza kufamba mimhanzi mikuru inomhanyisa mutengi uye inoita kuti hupenyu huve nyore kumushandisi, kunyanya mukutsvaga. Basa rekutsvaga risati raonekwa uye rakanyangarika maererano nemaonero, ikozvino ichagara ichionekwa padivi repaseri. Uye zvakare, zvimwe zvinhu zvekushandisa zvakagadziridzwa kuti zviite zvese nekukurumidza.
Inobatsirawo kuwana mabasa yebasa, zvisinei nechikamu cheiyo interface kwauri. Semuenzaniso, ingave irwo runyorwa, iyo yekutsvaga modhi, manejimendi weiyo wekubereka mutsara pamutsara wako wekutamba, nezvimwe. Zvese zvichave padhuze padyo.
Muchidimbu, ikozvino inotaridzika kunge yakasviba uye yazvino. Spotify inogadziriswazve uye siya zvakapfuura shure, kuve zvakanyanya zvinoenderana newebhu webhu uye neapp ma mobile devices.
Kana iwe uchida kuiisa izvozvi zve edza izvi zvigadziridzo iwe pachako, iwe unotoziva kuti inowanikwa munzvimbo dzekuchengetera dzakakurumbira distros, asi iwe unogona zvakare kushandisa yazvino vhezheni inowanikwa, iwe unogona tevera nhanho idzi yakapusa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Spotify: kugadziriswazve kweiyo app yeLinux desktop